Ingabe kufanelekile ukuthenga iMacBook Air ngo-2018? | Ngivela kwa-mac
Lapho usuphethe iMac futhi ucabanga ukuyivuselela, kuphakama umbuzo ongunaphakade wokuthi iyiphi iMac ezozifanelekela izidingo zami. Empeleni, uhla lweMac luhlukaniswe phakathi kwedeskithophu noma ilaptop futhi uma ukhetha ukuguquguquka kwekhompyutha ephathekayo, emgqeni wokuqala sineMacBook Pro neMacBook, kepha Ngabe iMacBook Air isakhanga namanje?
Kunjalo. Ama-Macs "aguga" enempilo kakhulu. Namuhla zisebenza ngokugcwele ngenani elikhulu lemisebenzi. Kuyiqiniso ukuthi abanaso isikrini esihle kunazo zonke emakethe, kepha banezinzuzo eziningi.
Futhi, amanye amakhasimende we-Apple agcina ngokukhetha i- imodeli evivinywe ngokuphelele ngokuqhathaniswa nokuthengwa kwamamodeli wamanje we-MacBook ne-MacBook Pro Bafaka ikhibhodi yovemvane eyimpikiswano. Ukushiya eceleni isikrini, esingeyona i-retina ne- design okungathi okuthile kungaphelelwa yisikhathi ngandlela thile, ikakhulukazi esikrinini, konke okunye kuyinzuzo.
Usayizi uyefana neMacBook, kepha kuyahlukahluka ngokulinganayo ukwedlula owokugcina. Ngaphezu kwalokho, kwezinye izinto kuyaphumelela. Isibonelo ngu impilo yebhethri, edlula amakhompyutha amanje, ngisho neMacBook Pro, ethe ukuba nkulu ukuba nebhethri eningi, ngenxa yokusebenza okuphezulu okudingekayo. Ibhethri leMacBook lihlala amahora ayi-12.
Elinye iphuzu elinamandla namuhla ukuguquguquka kohlobo lohlobo lwamachweba. Ngenkathi amakhompyutha anamuhla ene-USB-C, kulokhu sinamachweba we-USB-A nesifundi sekhadi le-SD. Ngokuqondene namanani, ubusha buyakhokhwa. IMacBook inenani elingu- € 1500 kanti iMacBook Air ingatholakala kulezi zinsuku isedayiswa ngemali engaphezudlwana kwe- € 900. Mhlawumbe ngenxa yalesi sizathu, lapho siya emitatsheni yolwazi noma ezikhumulweni zezindiza, sibona iMacBook Airs eningi kakhulu. Yini enye, Kungumshini ophelele wabasebenzisi abafuna ukuqala emhlabeni we-Apple futhi bangabi nezaba zokuthenga ikhompyutha ebizayo uma bengayisebenzisi kamuva.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Ingabe kufanelekile ukuthenga iMacBook Air ngo-2018?
I-watchOS 4.3.2 ne-tvOS 11.4.1 ikhishwe ngokusemthethweni kuwo wonke umuntu